Massimo Morrati Oo Inter Milan Kula Taliyey In Ay Soo Iibsadaan Kante.y
HomeWararka Ciyaaraha MaantaMassimo Morrati oo inter milan kula taliyey in ay soo iibsadaan Kante.y
May 4, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Madaxweynihii hore ee Inter Massimo Moratti wuxuu arkaa isku mid ahaanshaha u dhexeeya Antonio Conte iyo José Mourinho wuxuuna rumeysan yahay in Nerazzurri ay tahay inuu la soo wareego ciyaaryahanka khadka dhexe ee Chelsea N’Golo Kanté.
Milkiilihii hore ee Inter ayaa u sheegay Sky Sport Italia “Waan ku faraxsanahay in Inter ay mar kale ku guuleysatay horyaal waxaana rajeynayaa inaan mustaqbalka isla heli karno Moratti wuxuu rumeysan yahay in guushii ay ka gaareen Milan ay ahayd meeshii loo weeciyay ololaha Inter.
Waxaan u maleynayay in ku guuleysiga ciyaartaas ay wax fudud ka dhigi laheyd, Rossoneri ayaa ah kuwa kaliya ee u tartami kara hanashada horyaalka xilli ciyaareedkan Antonio Conte wuxuu gaadhay bartilmaameedkiisa isagoo difaacaya kooxda isla markaana siinaya ciyaartoy isku dabeecad ah. Wuxuu ahaa mid aan caadi aheyn.
Waa inaan dhahaa kooxdan Inter waa mid lagu xasuusto kooxda Trapattoni Waxaan sidoo kale arkaa inay lamid yihiin José Mourinho iyo Helenio Herrera sidoo kale. Iyagu waa xirfadlayaal halis ah oo leh maskax guuleysata Ayaa ah inuu Inter saxeexo si uu tallaabo hore ugu qaado tartamada Yurub.
Waxaan u maleynayaa in Kanté uu haysto wax walba oo awood dheeri ah siiya Inter. Waxaan la soo saxiixanay Wesley Sneijder xitaa haddii aan horey u helnay koox adag, laakiin waxaan ku noqonay wax aan caadi aheyn “Isku mid ayaa ka ah Kanté, laakiin, waxaan u leeyahay sidan taageere, way adkaan doontaa in la saxeexo.